Hehy · Desambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Hehy · Desambra, 2012
Tantara mikasika ny Hehy tamin'ny Desambra, 2012
Azia Atsinanana 09 Desambra 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 07 Desambra 2012
Mbola mitohy mameno ny vaovao - sy ny media sosialy - ihany ny fitsidihana nataon'ilay Amerikana vavy malaza mpilalao sarimihetsika mamoafady Kim Kardashian tany Bahrain. Tanaty andianà bitsika maro, napetrak'i Nicholas Kristof mpanoratra ao amin'ny New York Times mazava tsara ny tsy hafaliany tamin'ny fandàvana hanome azy fahazoan-dàlana hitsidika an'i Bahrain, toerana izay nanasàna an'i Kardashian hanokatra trano fivarotana "milkshake" hoy i Mohamed Hasan manoratra.
Azia Atsinanana 04 Desambra 2012
Efa tapitra ny amin'ity vaovao ity ankehitriny: Namingana ny tenany ihany ny gazety Shinoa People’s Daily tamin'ny herinandro raha nitatitra tamim-pahamatorana fa ny mpitarika koreana tavaratra Kim Jong-un no lehilahy manaitra-manintona indrindra mbola velona araka ny fanondroan'ny The Onion, gazety mpananihany iray avy any Etazonia. Rehefa tonga an-tserasera ny resaka dia...
Amerika Latina 03 Desambra 2012
Hantsoina hoe Fuleco ilay biby famantarana ny fiadiana ho tompon-daka manerantany hatao any Brezila. Safidy nampalahelo satria amin'ny tenin-jatovo breziliana dia mety hidika hoe "lava-pitombenana" io na hoe olona kamo na mpandainga. Nilaza ny tsy fahafaliany manerana ny tambajotra sosialy ny mpiserasera breziliana. Efa nisy ny fanangonan-tsonia nahavoriana sonia mihoatra ny 39 000.